Markii Hore Aubameyang, Haddana Gabriel Martinelli - Kooxaha Reer Spain Ee Barcelona Iyo Real Madrid Oo Duullaan Ku Ah Arsenal Iyo Gunners Oo Qaadaysa Tallaabo Ay Ku Ilaashanayso Da'yarka Reer Brazil - Gool24.Net
Markii Hore Aubameyang, Haddana Gabriel Martinelli – Kooxaha Reer Spain Ee Barcelona Iyo Real Madrid Oo Duullaan Ku Ah Arsenal Iyo Gunners Oo Qaadaysa Tallaabo Ay Ku Ilaashanayso Da’yarka Reer Brazil
January 23, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ka baqaysa inay lumiso labadeeda laacib ee Aubameyang oo ah xiddiga ugu goolasha badan naadiga xili ciyaareedkan iyo midkii horeba, kaas oo lala xidhiidhinayo Barcelona oo u doonaysa beddelka Luis Suarez oo dhaawac ka ah iyo da’yarka reer Brazil ee Gabriel Martinelli oo la sheegay in Real Madrid ay xiisanayso.
Martinelli oo ay da’diisu tahay 18 sannadood jir ayaa 21 ciyaarood oo uu u saftay Arsenal waxa uu u dhaliyey 10 gool, waxaanu buuxiyey booska uu ganaaxa kaga maqan yahay Aubameyang iyadoo uu ahaa laacibkii goolka layaabka leh u dhaliyey kulankii Chelsea ee sababta u noqday in kooxda reer London ay guul-darro ka badbaado.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa doonaysa in Martinelli ay ku darto liiska xiddigaha reer Brazil ee garoonka Santiago Bernabeu ay ugu diyaarinayso inay hoggaamiyaan mustaqbalka, waxanay isku diyaarinaysaa inay ka gudbiso dalab 50 milyan oo Gini ah iyadoo mushahar waalli ahna u ballan-qaadaysa, taas oo u fududayn karta in Martinelli uu ka hanweynaado Emirates oo uu u dhaqaaqo Spain.
Inkasta oo uu dhowaan qalinka ku duugay heshiis illaa 2024 ah, haddana arrinta ugu weyn ee Martinelli uu kaga dhaqaaqi karo Gunners ayaa waxay tahay in usbuucii uu mushahar ahaan uga qaato 10,000 Gini oo kaliya, taas oo ah halka ay Real Madrid qorshaynayso inay kasoo marto iyadoo u sheegi doonta inay siin doonto mushahar malaayiin ah sannadkii.
Sida uu wargeysku sheegay, Arsenal waxay ogtahay halista ay Real Madrid iyo Barcelona ku hayaan, waxaanay hore albaabada uga xidhay dalab uga yimid Barca oo ku aaddanaa weeraryahanka Aubameyang oo ay qaab amaah ah ugu soo bandhigtay in lagu siiyo illaa dhamaadka xili ciyaareedka, kaddibna ay shubto lacagta lagu qiimeeyo. Tallaabada labaad ee ay qaadayso Arsenal ayaa waxa la sheegay in ay mushaharka saddex jibbaar uga dhigi doonto Martinelli si aanu ugu dhego-nuglaanin dhawaaqyada Real Madrid.
Arsenal waxay ku qasbanaan doontaa in Aubameyang ay iibiso xagaaga ama bisha January ee sannadka dambe maadama heshiiskiisa ay sannad iyo bilo koobani ka hadhsan yihiin oo uu si xor ah uga tegi doono haddii aan la iibinin ama heshiis cusub aanu saxeexin, balse kiiska Martinelli wuu ka duwan yahay, waxaanu haystaa afar sanadood oo dambe sii soconaya.